के विष्णु माझीलाई इन्द्रेणी कार्यक्रममा ल्याएर सार्वजनिक गर्छन त कृष्ण कडेल र पुन्य गौतमले ? (भिडियो हेर्नुहोस्) – Classic Khabar
के विष्णु माझीलाई इन्द्रेणी कार्यक्रममा ल्याएर सार्वजनिक गर्छन त कृष्ण कडेल र पुन्य गौतमले ? (भिडियो हेर्नुहोस्)
August 30, 2021 63
विष्णु माझीलाई कुनै पनि हालतमा मिडियामा ल्याउने र आम दर्शक श्रोतासँग साक्षात्कार गराएरै छोड्ने भनेर पूण्य गौतम र कृष्ण कंडेलको सहमति भएको छ। आजभन्दा करिब चार बर्ष पहिले बिष्णु माझीले दोहोरीमा गाएको गीत युबट्युबमा राखिएको थियो ।जबजब विष्णु माझीका गीतहरू हीट हुन्छन् तबतब उनको खोजी तथा चर्चा निकै नै हुने गर्दछ।
विष्णु माझीले गाउन थालेको पनि निकै वर्ष भैसक्यो तर उनी कस्ती छिन्,कहाँ बस्छिन् ? आजसम्म कसै लाई पनि थाहा छैन। उनका श्रीमान सुन्दरमणी अधिकारीले विष्णुलाई दोश्रो विवाह गरि लगेको भन्ने चाहिँ धेरै लाई थाहा छ।उनी पनि संगीत क्षेत्रकै भएका कारण विष्णु माझीलाई पनि उनले गीतमा सहयोग गर्दै आइरहेका छन्।
उनले गाएका गीतहरू प्रत्येक वर्ष हीट हुन्छन् तर आफू भने कहिले पनि मिडियामा सार्वजनिक रुपमा देखा पर्दिनन् ।उनी दोहोरी तिर पनि आउँदिनन् र एकल गायनमा मात्रै गाउने गर्दछन् । जसको कारण उनको पारीवारिक अवस्था बाहिर आउँछ भनेर यस्तो गरिएको हो भनेर पनि धेरैले आ,रोप लगाएका छन् भने कतिपयले सुन्दरमणिको उनको रेट बढी बनाउनको लागि यस्तो प्रो,पोगन्डा रचेको पनि भन्ने गरेका छन्।
Prevटिकटकमा जात्रै गरेर सबैलाई हसाउने बुटवलकी बिष्णु पाण्डे दिदी मिडियामा । यस्तो गरेपछि भान्छाबाटै भाईरल भईन (भिडियो हेर्नुस)
Nextमाधव नेपालसँग मिल्न वामदेव गौतमले राखे यि ३ सर्त, माधव नेपाल ‘साथीहरुले मानेनन्’ भनेर पन्छिए, अब के गर्लान् गौतम ?
अबिरल वर्षाको कारण पर्वत, स्याङ्जा र गुल्मीको सङ्गमस्थल सेतिवेणीका नौ घर बाढीले बगायो